Hvm Analamanga : Manolotra an-dRajaonarimampianina ho kandidà -
AccueilRaharaham-pirenenaHvm Analamanga : Manolotra an-dRajaonarimampianina ho kandidà
Tsy ampihambahambana. Nambaran’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara na ny HVM tamin’ny fomba ôfisialy omaly, fa manosika ary mangataka ny firotsahan’i Hery Rajaonarimampianina ho fidiana filoham-pirenena amin’ny fifidianana taona 2018 izy ireo.
“Tsy manana kandidà afa-tsy ny filoham-pirenena amin’izao fotoana izao izahay mpikambana HVM tsy ankanavaka manerana an’i Madagasikara amin’ny fifidianana amin’ny 2018. Noho izany, manosika sy manohana azy hatrany izahay. Na izany aza anefa, miankina aminy ihany anefa izany fa faniriana sy fangatahana fotsiny ihany. Izany hoe, miankina amin’ny valinteniny sisa amin’io fangatahana sy fanohanana io”, hoy ny filoha nasionalin’ny antoko HVM, Rivo Rakotovao
Efa hitan’ny olona rehetra, ny ezaky ny filoha amin’ny famoahana ny firenena tao anatin’ny lavaka mangitsokitsoky ny fahantrana. Efa hitan’ny vahoaka ihany koa ny fahavononany hitondra fandrosoana tena izy ho an’I Madagasiakra.
Tsiahivina fa anisan’ny nanosika ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara amin’ny fanolorana ny filoha Hery Rajaonarimampianina ho kandidà ny politika-pampandrosoana hananan’ny filoham-pirenena amin’izao fotoana izao. Manginy fotsiny ireo asa efa vita, toa ny tetikasa ara-toekarena, tetikasa ara-tsosialy, sns. Teo ihany koa ny fatokisan’ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ity fitondrana misy amin’izao fotoana ity ka nahazoantsika famatsiam-bola marolafy avy amin’ireo firenen-dehibe toa an’i Vietnam, Etazonia, Maraoka, Chine, sns. Tsy vitan’ilay famatsiana 10,6 miliara Dolara tamin’ny fihaonana iraisam-pirenena tany Paris, Frantsa, iny ihany mantsy no azon’i Madagasikara fa saika nihazakazaka nanohana azy avokoa ireo resy lahatra rehetra amin’ny politika-pampandrosoan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Etsy andaniny, ho fanamafisana izay efa notapahin’ny antoko HVM tamin’ny kaongresy goavana tany Fianarantsoa ihany koa iny fanambarann’izy ireo omaly nandritra ny fambolen-kazo nokarakarain’izy ireo teny Anjeva iny.